OS X Yosemite - Apple OS | Esi m mac
OS X Yosemite weta ohuru na emeghariri imezi ihe di nma kari OS X Mavericks nwere akara ngosi ohuru maka ngwa nke ndi obodo. Ọ na-agbakwụnye ọrụ ka mma n'ime Akara nke na-enye ohere ịmekọrịta ọrụ na Safari ma na-eme ka ọrụ rụọ ọrụ.
A ọhụrụ imewe na ọhụrụ ọrụ maka safari na mmelite na ọchụchọ maka ọkacha mmasị, tinye kwa Ozi dobe na iCloud Drive ha anọghị na Mavericks. N'ihi OS X Yosemite anyị nwere ike ugbu a zipu ma ọ bụ nata oku ekwentị na ozi ederede ozugbo na Mac ha tinyekwara Airdrop nke anyị nwere ike iji iOS were kesaa ụdị akwụkwọ niile.
Na imecha anyị enweghị ike ichefu ndị dị ike Wepụ aka nke ahụ na-enye anyị ohere ịmalite ọrụ na Mac ma gaa n'ihu na iPhone ma ọ bụ iPad.
Apple machibidoro ohere na Apple Store Online ka ọhụrụ na nsụgharị nke macOS na Safari
Kemgbe ọtụtụ afọ, egosila na ọ nweghị sistemụ arụmọrụ dị 100%. Otu ihe…
Apple weputara '2017-001' Mmelite Nche maka OS X Yosemite na El Capitan
por Jordi Gimenez eme 5 afọ .
Nyaahụ bụ ụbọchị mmelite na Apple. Ma ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ izu na nsụgharị beta nke dị iche iche ...
Safari 10 dị ugbu a maka OS X El Capitan na OS X Yosemite
por Jordi Gimenez eme 6 afọ .
Nke a abụrụla ehihie nke mmelite na otu nchọgharị Safari maka OS X enweghị ike ịbụ n'ụzọ ọzọ ...
Safari 10 beta dị maka ndị mmepe na OS X El Capitan na Yosemite
por Ụlọ Ignatius eme 6 afọ .
Otu izu mgbe mwepụ nke beta mbụ nke macOS Sierra, Apple ka mere ka ...
por Pedro Rodas kwuru eme 6 afọ .
Ihe ngosi ohuru nke 12 nke anụ ọhịa nke nwere ọla edo na ihe nhazi 1,2 GHz, 8 GB Ram na 512 GB nke…
por Pedro Rodas kwuru eme 7 afọ .
Otu ụbọchị ụka anyị ga - anọnyere gị na nchịkọta kpochapụwo nke kachasị mma n'izu na Soy de Mac….
Etu ị ga-esi laghachi OS X Yosemite site na OS X El Capitan
por Jordi Gimenez eme 7 afọ .
N'ezie, ihe karịrị otu onye n'ime gị na-eche ịlaghachi na sistemụ arụmọrụ nke Mac gị ... Nke a ...
Mma autofill na paswọọdụ management na Safari 9.0
Anyị enweelarị ụdị OS X El Capitan ọhụrụ maka ndị ọrụ niile chọrọ ...
Mac OS X na mobile iOS agaghị ejikọta
Na nso nso a, enwere m ike ịgụ na asịrị ụgbụ nke ihe nwere ike ịbụ ọdịnihu nke OS X na ...
Safari weputara oru ohuru na OS X El Capitan
Ugbu a ị na-ebudata sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke apụl bitten, sistemu ...
Safari maka Mac emelitere tupu mmalite nke OS X El Capitan
Guysmụ okorobịa si Cupertino na-eguzogide mwepụta nke OS X El Capitan na tupu nke ahụ ha ahapụ anyị maka ...
Kwado ma ọ bụ gbanyụọ Dashboard na OS X Yosemite
Otu esi emepụta ọbá akwụkwọ ọhụrụ na ngwa Foto
Esi chọpụta ihe nlereanya zuru oke nke Mac gị
Gbanwee ma ọ bụ Ikwupu gị iCloud akaụntụ OS X
Etu ị ga-esi gbanyegharịa Mac nke 'Nọgidesiri'